ग्यासमा कमिसन ५ प्रतिशत नपुगे सम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं, अध्यक्ष सँगकाे अन्तरवार्ता-Setoghar
ग्यासमा कमिसन ५ प्रतिशत नपुगे सम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं, अध्यक्ष सँगकाे अन्तरवार्ता
महेश्वर कुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष, ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल
महेश्वर कुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष
ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालको भर्खर सम्पन्न तेस्रो महाधिवेसनबाट महासंघ नेतृत्वको निम्ति अध्यक्षको जिम्मेवारी अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भई कार्यभार सम्हाल्नुभएका अनुभवी व्यवसायी महेश्वर कुमार श्रेष्ठले प्राप्त गर्नुभएको छ ।
विगत लामो समय सरकारी सेवामा सेवारत श्रेष्ठ आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न सङ्घर्षहरु पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आउन सफल हुनुभएको हो । लामो समय विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तरगत गुप्तचर निकायको रुपमा रही काम गर्नुभएको कारण नेपालका प्रशासनिक क्षेत्रलाई ऊहाँले नजिकबाट बुझ्नुभएको छ । वि.सं २०४९ देखि नेपाल सरकारको जागिरबाट अवकाश लिइसकेपछि भने श्रेष्ठले ग्यास व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्नुभयो ।
हामीले ग्यास व्यवसायी महासंघ नेपालको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका श्रेष्ठसँग अहिलेको अवस्थामा ग्यास व्यवसाय, समस्या र चुनौती, राज्यको दृष्टिकोण, महासंघका अबका योजना र कार्यदिशा लगायतमा रहेर कुराकानी गरेका थियौं । प्रस्तुछ छ सोही कुराकानी ः
ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल कस्तो संस्था हो ? यसले के गर्छ ?
ग्यास व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा हामीले ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल अन्तरगत काम गर्दै आएका छौं । विगतमा हामी आवद्ध रहेको ग्यास व्यवसायीहरु प्रति हेरिने राज्यको दृष्टिकोण समेत संकुचित थियो । अहिले सम्म आइपुग्दा भने ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल निकै नै शशक्त संस्था समेत बनिसकेको छ । व्यवसायीहरुले उठाएका विषयवस्तुहरुले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्दै सोही बमोजिम व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी नीतिहरु समेत बनेका छन् । हामी व्यवसायीहरुकै दवावको कारण अहिले एकातिर ग्यास व्यवसाय व्यवस्थित बन्दै गएको छ भने नेपालमा कमसल सामान उत्पादन गर्ने रेगुलेटर कम्पनीहरु बन्द समेत भइसकेका छन् । अहिले सम्म आइपुग्दा महासंघको पहलमा नेपालमा सुधारको निम्ति निकै धेरै कामहरु भएका छन् ।
हामी पनि देशका नागरिक नै भएको कारण हामी सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले सोही बमोजिम उपभोक्ताहरुलाइ सचेत बनाउने हाम्रो दायित्व पूरा गर्न हामी निरन्तर लागिपरेका छौं ।
ग्यास व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?
व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति डिलर प्रमाणिकरण पहिलो सर्त हो । अहिले प्रमाणिकरण नगरिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व समेत संकलन हुन सकेको छैन । डिलर प्रमाणिकरणबाट कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरुको कारोबारमा पनि वृद्धि हुन गई व्यवसाय आत्मनिर्भर बन्ने आधार आधार तयार हुन सक्छ भने यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र दुर्घटनाहरुमा न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पुग्छ ।
तपाईंहरुले पछिल्लो समय सचेतनामूलक कार्यहरुमा पनि चासो देखाइरहनुभएको छ, सचेतना विस्तारलाई अब कसरी अघी बढाउनुहुन्छ ?
अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाल यो हाम्रो स्रोत र साधनको प्रयाप्तताको अभावमा सीमित क्षेत्रमा मात्रै सञ्चालनमा छ । साथै यो कार्य नेपाल सरकारकै दायित्व अन्तरगत पर्नुपर्ने कार्य समेत हो । यसैकारण हामीलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति राज्य पक्षको पनि सहयोगको खाँचो छ ।
कमिसन नबढेको कारण व्यवसाय टिकाउनै गाह्रो भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ नि ?
अहिले ग्यास कारोबारमा लगानी तथा घरभाडा बढेको छ तर पनि जुन रुपमा यस क्षेत्रका व्यवसायी टिक्न सक्ने गरी हामी व्यवसायीहरुको कमिसन वा मुनाफा पनि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो कमिसन दर भने निकै न्यून छ । प्रति सिलिण्डर प्राप्त हुने ३२ रुपियाँ मध्येबाट पनि ४ रुपियाँ भ्याट बापत राज्यलाई तिर्नुपर्छ । बाँकी रहेको २८ रुपियाँले व्यवसायी टिक्ने अवस्था छैन । यसैकारण व्यवसायीहरु विस्थापित समेत भइरहेका छन् । यसले हाम्रो व्यवसाय धानिन सक्दैन । हाम्रो व्यवसायमा विगत ५ बर्ष देखि व्यवसायीहरुले पाउने प्रतिफल बढ्न नसक्नु दुर्भाग्या हो ।
यसैकारण ग्यास कारोबारको क्रममा वैज्ञानिक पद्धतिबाट मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा पनि लगानीको तुलनामा ५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था हुनसके मात्र हाम्रो व्यवसाय आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छ ।
महासंघ अब कसरी अघी बढ्छ ?
हामी हाम्रो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति तत्काल नै अहिलेको नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु सहित हाम्रा जाहेज मागहरु सहित विभिन्न सरकारी निकायहरुमा जान्छौं । हामी आशावादी छौं, अबको स्थिर सरकारबाट हाम्रा मागहरुको सम्बोधन गरिनेछन् । हामीले पटक–पटक हाम्रा मागहरु बारे कुरा राख्दै आएको कारण अहिले सम्बन्धित निकाय पनि हाम्रो अवस्था बारे जानकार नै छ । ऊहाँहरुका पनि केही परिस्थितिजन्य जटिलताहरु होलान्, यद्यपि हाम्रा मागहरु सम्बोधनको निम्ति तयार हुनैपर्छ । यदि सरोकारवाला निकायहरु हाम्रा माग सम्बोधन सम्बन्धमा तयार हुनुभएन भने हामी चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु अघी सार्न समेत बाध्य हुनेछौं । जुन हाम्रो रहरको विषय भने होइन ।
हामी अहिले प्रादेशिक संरचनाको अवधारणा बमोजिम अघी बढेका छौं । ५ ओटा प्रदेशहरुमा हामीले संगठनहरु विस्तार गरिसक्यौं । अन्य प्रदेश र जिल्लामा समेत हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउनु जरुरी छ । ती सबै जिल्ला र प्रदेशहरुको आर्थिक स्रोतको आधार समेत बनाउनुछ । हामीले सचेतना विकासको निम्ति समेत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । अन्य विविध प्रशस्तै कामहरु हामीले महासंघबाट गर्नुछ ।
महाधिवेसनको समयमा नै तत्काल आन्दोलन अघी बढाउने उद्घोष गर्नुभएको छ, आन्दोलन र नाराजुलुसबाट मात्रै व्यावसायिक समस्या समाधान हुने देख्नुभएको हो त ?
आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । हामी व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु । त्यस माथि पनि ग्यास दैनिक जीवनको निम्ति अत्यावश्यक वस्तु । यसै कारोबारमा रहेका हामी व्यवसायीहरुले हाम्रो तहबाट यस व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको निम्ति विभिन्न पहलहरु गर्दै आएका छौं । ठूलो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हामी व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर पनि हुनुपर्छ । हामीले पटक–पटक हाम्रा मागहरु राखिरहँदा पनि ती मागहरु सम्बोधन नगरेको कारण हामी बाध्यतावश आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।
हामीले अघिल्लो बर्ष पनि आन्दोलन गर्ने मनसाय नबनाएका होइनौं । तर हामीले आन्दोलन गर्नको निम्ति समस्यामा काठमाडौंमा नै देख्यौं । काठमाडौंका व्यवसायीहरुमा व्यावसायिक एकता बलियो देखिँदैन । प्रतिष्पर्धीले पसल बन्द गरे त्यसको लाभ आफूले लिन सकिन्छ भन्ने मनसाय व्यवसायीहरुमा भएको कारण हाम्रो आन्दोलन कतै बीचैमा नै तुहिने त होइन भन्नेमा समेत हामीमा द्विविधा भयो । साथै आयल निगमले समेत हाम्रा माग सम्बोधन गर्नेमा आश्वस्त पारेको कारण हामी आन्दोलनबाट पछि हटेका हौं । अहिले पनि हाम्रा समस्या समाधान नभए हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । यसको लागि हामीले आन्तरिक तयारीलाई बलियो बनाउँदैछौं ।
प्रादेशिक संरचनामा समेत गइसकेको महासंघका आगामी कार्यदिशा के हुनेछ ?
हामी अहिले प्रादेशिक संरचनाको अवधारणा बमोजिम अघी बढेका छौं । ५ ओटा प्रदेशहरुमा हामीले संगठनहरु विस्तार गरिसक्यौं । अन्य प्रदेश र जिल्लामा समेत हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउनु जरुरी छ । ती सबै जिल्ला र प्रदेशहरुको आर्थिक स्रोतको आधार समेत बनाउनुछ । हामीले सचेतना विकासको निम्ति समेत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । अन्य विविध प्रशस्तै कामहरु हामीले महासंघबाट गर्नुछ । हामी प्रति व्यवसायीहरुको ठूलो विश्वास छ । अहिले हामीले ग्यास व्यवसायीहरुको विधान समेत बनाएर यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा पु¥याएका पनि छौं । आगामी कार्ययोजनाहरु बन्ने क्रममा नै छन् ।
तपाईंहरुका अहिलेका समस्या चाहिँ के हुन् ?
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तरगत अहिले स्थानीय तहले करको दायरा समेत बढाउँदै गएको छ । बुटबल लगायत केही ठाऊँमा ग्यास बोकेका गाडीहरुबाट रकम अशुल गर्ने काम गर्न लागिएको भन्ने सुनिएको छ । अन्य समस्याहरु पनि थपिन सक्ने हामीले देखेका छौं ।
ग्यास व्यवसायमा राज्यकाे नीति कस्ताे हुनुपर्ला ?
अन्य क्षेत्र जस्तै यस क्षेत्रकाे सिन्डिकेट पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्राे मान्यता हाे । हामी सधैं सिण्डिकेटको विरुद्धमा छौं । अहिले नेपालमा ५१ ओटा ग्यास उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेकोमा अन्य उद्योगहरुलाई पनि खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । साथै ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको समेत प्रयाप्त सहयोग हुनुपर्छ । सहज रुपमा ग्यास प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार मातहतका निकायहरुको भूमीका पनि थप प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।
तपार्इ तपाईं ग्यास व्यवसायमा चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभएकाे हाे ?
लक्ष्मी बैंकका सञ्चालक मधुसुदन अग्रवालसँग मेरो पहिले देखि नै सम्पर्क थियो । ऊहाँलाई मैले श्रीमतीको लागि जागिर व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दा ऊहाँले जागिर नगर्न बरु आफू मातहत सञ्चालित एचपी ग्यासको डिलरशिप लिई काम गर्न सल्लाह दिँदै त्यसको निम्ति आफूले समेत सहयोग गर्ने भन्दै हौसला समेत दिनुभयो । । जागिरको भविष्य अनिस्चित रहने हुँदा व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म भित्र पनि पलायो । यसैकारण व्यावसायिक यात्रा रोज्ने क्रममा म पनि ग्यास व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुँ ।
ग्यास व्यवसायको तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
ग्यास व्यवसाय निकै नै जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावसँगै नेपालमा पनि मूल्यमा परिवर्तन हुने गर्छ । मूल्य घट्दा होस् वा बढ्दा होस्, यसबाट पर्न जाने मुख्य भार भनेको व्यवसायीहरुलाई नै हो ।
अहिले पनि हामीले जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाएका छौं । हाम्रा यी विविध योजना र कार्यक्रमहरु सफल पार्न हामीलाई नेपाल आयल निगम, राज्य र स्थानीय जनता र व्यवसायीहरुको ठूलो सहयोगको आवश्यक छ । हामी चाहन्छौं, प्रत्येक व्यक्तिको घरमा १ वा २ ओटा सिलिण्डर राखे पुग्ने वातावरण बनोस् । धेरै सिलिण्डर थुपारेर आर्थिक भार र दुर्घटनाको त्रासमा हामी बस्नु नपरोस् ।